Akhriso: Qodobbada Ugu Muhiimsanaa Hadal-jeedinta Jawaari – Goobjoog News
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta istiqaaladiisa u gudbiyay golaha shacabka isaga oo yiri “Maanta oo bisha Abriil tahay 12, 2018 waxaan Golahan sharafta leh hortiina u imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee Allahu swt ka sokow aad idinku igu ammaansateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo. Waxaan idinka codsanaya inaad xil-hayntii Guddoonka aad iga cafisaan istaqqaleydana iga oggolaataan.
Mar uu ka hadlayey in jagada lacag laga siistay “Maalmahan dambe waxaa jiray in kuwo Allah-ka-cabsiga ku yaryahay ay baraha bulshada ku tebinayeen lacago malaayiin ah layga siistay istiqaalada xil-ka-degidda. Hadaba anigoo ku taagan nuxurka dhaartaas aan horey usoo maray, waxaan si Alla-ogaan ah u rabaa inaan hortiina ka caddeeyo in aysan jirin wax dhaqaale ah oo laygaga iibsaday isqaaladda dhiibideeda, laa Dawladdeena walaa dawlad shisheeye. Ayadoo markhaati iyo goobjoog ahaayeen markii Aniga iyo Madaxweynaha arrinka ka wada xajooneynay waxay ahaayeen arrimo muhiim u ah qarannimada iyo jiritaanka dawladnimada dalkeena, kuwo u dan ah xasaanadda xubnaha iyo xurmada xarunta Golaha Shacabka.
Jawaari waxaa uu wax weyn ku sheegay isaga oo ka tagayo xafiiska xilli ay Xildhibaannada wada joogaan, oo la mideysan yahay “Mudaneyaal, Guddoomiyenimada ka hor waxaan ahay Soomaali. Allahu swt wuxuu igu mannaystay nicmooyin badan oo aan koobi karin… waa Alxamdullillaahi … Mahad Asagaa leh swt. Wuxuu kaloo igu mannaystay oo uu nasiib ii siiyey inuu ii xilqaamay inaan muddo lix sano ku dhowaad hoggaamiyey xafiiskan sare oo ah hoyga dawladnimada iyo hay’adaha dawladda laga unkiyo, ahna halka kayd-haynta u ah kuna dhowraarsan tahay gobannimada iyo sayaadada qaranka laguna ilaaliyo … taasna waa Mahad Allah Alxamdulillah – haddana Swt qaddaray inuun mar kale igu mannaysto nicmadan weyn, oo ah in maanta sidka xilka iyo culayskii uu lahaa iga dejiyo, ayadoo xubnihii Golaha Shacbiga oo kulansan, oo mideysan aan kala jabnayn
Maxamed Cusmaan Jawaari waxaa uu Xildhibaannada kula dardaarmay in ay ogaadaan xogta waxa ay ogolaannayaan ama diidayaan “Waxaan guud ahaan u mahadinaya dhammaan xildhibaanada dhan walba ay mooshinka ama soojeedinta uga soo jeedeen kuna ammaanan yihiin adeegsiga agabka dastuuriga ay adeegsadeen. Waxaan mar kale xildhibaannada xusuusinaya markii tirada guud ee shacbiga Soomaaliya loo qaybiyo 276, xildhibaan kasta oo Golahan ka mid ah wuxuu u dhigmaa oo mattala dhor iyo konto kun qof soomali ah. Saa daraadeed, waxaa iga dardaar ah fadlan markii aad codeyneyso oo aad wax oggo’aaneyso adigoo xog ogaal ah ku oggolow, haddii aad wax diideysana xog ogaalnimo ku diid, sidoo kale markii aad wax saxiixeysona haku degdegin ee xog ogaalnimo ku saxiix.
Sarreynta Sharciga mar uu ka hadlayey waxaa uu sheegay “Taniyo intii ay bilaabatay mashkaladda mooshinkan, aniga iyo tiro badan xildhibaanno ah ma codsanin waxa kale aan ka ahayn laba arrimood, oo kala ah: (1) in sarraynta sharciga la ilaaliyo oo codeyn dastuurka iyo Xeer-hoosaadka waafaqsan lagu xalliyo; ama (2) wadahadal iyo xal siyaasadeed lagu soo afjaro. Intaas waxaa dheer inaan si buuxda u wada oggolaanay talo kasta la soo jeediyey oo labadaas qodob u dhow. Waase loo dhego nuglaan waayey.
Jawaari waxaa uu ka hadlay sababaha ku kalifay inuu qaato go’aanka istiqaalada
a) Anigoo garwaaqsan waxaan doorbiday inaan ka mid noqdo xallinta azmada siyaasadeed ee ka aloosantay mooshinkan, oo aan qayb ka noqon carqaladeynta xal-ka-gaarista mashkaladda;
b) Waxaan garwaaqsaday haddii mashkaladdan aan dhakhso loo soo afjarin, waxaa ii muuqday saansaamo usii tarmi karay ama sababi karay burburka Golaha Shacabka ama ugu yaraan waxyello weyn u geysan karo bedqabka iyo haybadda Golaha Shacabka. Waxaan doorbiday in aan u istaagno jiritaanka iyo bedqabka Golaha iyo midnimada xubnaha Golaha;
c) Haddii aan goor hore usha dhaxda laga qaban waxaa ii muuqatay in Goluhu qarka u saarnaa in uu qaato go’aanno garabmarsan Dastuurka iyo Xeer-hoosaadka, taasoo noqon lahayd barmadow oo taariikhda dalkeena weligeed ka tirmin. Saa daraadeed waxaan doorbidnay inaan Goleheena lagu eedeyn kana badbaadino inuu baalmaro sarraynta sharciga iyo ama ku kaco wax baalmarsan dhaqan-wanaagga dimuqraadiyadeed ee baarlamaaniga ah;
d) Markii aan arkay wax u eg cudud sheegasho, waxaa si dhow iigu muuqatay in sii socodka kala aragti duwanaashada dhexdeena dhaawac lasyku gaarsiiyo ama dhiigba daato. Saa daraadeed ma oggoli, mana oggolaan karin in daraadeyda uu qofna dhaawac ku gaaro;
e) Waxaan garwaaqsaday in shacbigeena, oo naga sugaya in aan ka shaqayno sugidda iyo ilaalinta gobonimada iyo dhisidda iyo dhidibbo u aasidda hay’adaha dawladnimada, iyo in laga samatabxiyo xaaladaha cakiran, shacbigeena oo aad u dhibban ma mudna, ma istaahilo mana xammili karo khilaaf siyaasadeed dheeraada;
f) Waxaan garwaaqsaay oo aan tixgelinay talooyiinkii akhyaarta shacbiga iyo xildhibaannada Labada Aqal ee BFS si joogta ah noogu soo tebinayeen, talooyinkooda oo u badnaa: “in la kala roonaadaa roon” – waa marag madoonto, dawladnimadeenan oo aan weli tigaadin haddii aan loo turin in jiritaankeedu khatar galayo. Saa daraadeed waxaan doorbidnay in aan anaga ka roonaano, oo maanta amaanadii xilqaanka Guddoonka Golaha, oo aad ii igmateen 11th Jannayo 2017 aan si deggan dib idinku soo celiyo si waafaqsan Dastuurka iyo Xeer-hoosaadka Golaha Shacabka.
Sababahaas oo aan garwaaqsaday iyo kuwo kale oo badan aan halkan ka sheeegi karin baa gundhig u ah inaan tanaasulo.
Ugu dambeyntii, waxaa uu sheegay in 15 maalin ku wareejin doono xilka“Idinkuna ii ballanqaada ilaa iyo inta aan ka ilaabayo Guddoomiyenimada, maalmahan hore inaan is booqashada badino, maadaama shan sano iyo dheeraad aan meel ku xirna, haddaan madax-bannaanaaday ee aad i bartaan Xamar meelaha laga galo iyo meelaha xildhibaanada ku caweeyaan.
M.ne Guddoomiye, si waafaqsan dhaqanka dawladeedka, laga bilaabo maanta uunbaad tahay Ku-sime Guddoomiye,
Aan u hawlgalno muddo 15 beri gudahood inaan doorano Guddoomiyeheena Cusub, aniguna muddadaas gudaheed aan u hawlgalo diyaarinta xil-wareejinta rasmiga ah ee maamulka iyo hantida Golaha.
Ciidanka Dowladda Oo Howlgallo Ka Wada Jowhar
B/weyne: Khasaare Ka Dhashay Darbi Kusoo Dumay Dad Ku Hoos Ganacsanayey